तिथि मेरो पत्रु »6राम्रो स्वास्थ्य नाता लागि राम्रो छ किन कारणहरू
द्वारा जेनिफर ब्राउन बैंक
6 राम्रो स्वास्थ्य नाता लागि राम्रो छ किन कारणहरू
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अगस्ट. 07 2020 |2मिनेट पढ्न
राल्फ वाल्डो इमर्सनले एक चोटि यसो, "स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो धन हो।"
तर दुर्भाग्य, हामी टाढा पनि धेरै एक मा काम गर्दै छन् "घाटा।"
कम्प्युटर र अधिक आसीन जीवनशैलीको मा यो दोष; कारण व्यस्त कार्यक्रम गर्न चाँडो खाना रेस्टुरेन्ट मा अत्यधिक; स्वस्थ प्रचलनबारे जागरूकता को या बस एक कमी.
निम्न तथ्याङ्कहरू विचार:
CNN.COM अनुसार, अमेरिका मा वयस्क बीच मोटापा बीच दोब्बर भएको छ 1990 र 2010.
मोटोपना को वार्षिक चिकित्सा हेरविचार लागत अधिक $140 अरब.
रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्र चुरोट धूम्रपान भन्दा बढी ल्याउनुहुन्न रिपोर्ट 480,000 यो U.S मा मृत्यु प्रत्येक वर्ष.
धूम्रपान मृत्यु को प्रमुख अकाल कारण छ.
अधिक वजन र मोटा हुनु जस्तै केही रोगहरु र रोगहरु को विकास को लागि एक जोखिम कारक हुन सक्छ: हृदय रोग, टाइप2मधुमेह, केही क्यान्सर र उच्च रक्तचाप.
तर, राम्रो समाचार हो. हामी सधैं वंशानुगत कारक नियन्त्रण गर्न सक्दैन तापनि, भाग्य, चकलेट वा एक आत्मीयता, राम्रो स्वास्थ्य को लागि प्रदान गर्न हामी लिन सक्छौं केही सक्रिय उपाय हो.
यहाँ हामी किन गर्नुपर्छ'S...
1. राम्रो स्वास्थ्य हामीलाई राम्रो सम्बन्ध अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ. राम्रो हामी महसुस, हाम्रो मूड राम्रो, (सामान्यतया), वरिपरि हुन र अन्तरक्रिया गर्न जो हामीलाई रमाइलो बनाउँछ. के तपाईं कहिल्यै सदा दुखाइ बारेमा गुनासो गर्ने एक व्यक्ति वरिपरि भएको छ? तिनीहरूले सधैं पिन्चे हो किनभने कसले तपाईं मा तस्वीरें? यो निश्चित मजा कारक एक स्पंज राख्न सक्छौं.
2. राम्रो स्वास्थ्य राम्रो बलिया योगदान, बल, र जोस. यसले हामीलाई प्रतिबन्ध र सीमितता बिना शारीरिक गतिविधिमा संलग्न गर्न अनुमति दिन्छ.
3. राम्रो स्वास्थ्य हामीलाई स्वतन्त्र हुन अनुमति दिन्छ, र अरूलाई आवश्यकता छैन (वा बाह्य) हाम्रो दैनिक हेरविचार को लागि प्रदान गर्न; यो हामी ख्याल ती लागि विचार देखाउँछ.
4. राम्रो स्वास्थ्य महान् दीर्घायु र जीवन राम्रो गुणस्तरको प्रदान.
5. राम्रो स्वास्थ्य पैसा बचत. यो सही हो. यो महंगा औषधी रोकथाम गर्न सक्छ, निरन्तर डक्टरको भ्रमणको खर्च, र उच्च बीमा प्रीमियम.
6. राम्रो स्वास्थ्य उपस्थिति अझ बढाउँछ. चमक छाला संग केटी विचार, छवटा पैक संग संवर्धन, र तिनीहरूलाई तिनीहरूले लगाउने कुनै पनि भेषमा उत्कृष्ट हेर्न अनुमति चिकना तथ्याङ्कले भएकाहरूले. "तपाईंले कहिले राम्रो हेर्न, तपाईं राम्रो लाग्छ। "
यस कुरालाई मनमा राख्दै, यहाँ केही सरल छन्, छिटो सुझाव, लामो समय सम्म चलने प्रभाव र इष्टतम स्वास्थ्य लागि.
सानो कदम चाल्नुहोस्. जीवनमा धेरै अन्य कुराहरू जस्तै, बिस्तारै बिस्तारै दृष्टिकोण सबै भन्दा राम्रो छ. प्रत्येक दिन फलफूल र तरकारी खाने र संयमता मा खाएर सुरु.
यदि तपाईं धूम्रपान, अन्त्य.
व्यायाम रुचि छैन? विकल्प विचार. उदाहरणका लागि, म नाच मन. तपाईं नृत्य कैलोरी जला र आकार मा रहन मजा तरिका पनि छ भनेर थाह थियो? आफ्नो क्षेत्र मा एक Zumba विद्यार्थी विचार. अथवा बलिङ वा पौडी तपाईँको लिङ्कमा थप हुनेछ. केही केही भन्दा राम्रो छ.
अधिक पानी पिउन. यो छाला लागि राम्रो हो र यो दोष बाहिर flushes.
पर्याप्त आराम गर्नुहोस्. विशेषज्ञ बारेमा आठ घण्टा राती सिफारिस.
घरपालुवा आफु. स्वास्थ्य अध्ययन एक भएको विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान र मित्रता को एक अर्थमा प्रदान गर्दछ देखाउन.
सबैभन्दा ठूलो उपहार तपाईं आफैलाई दिन सक्छ र आफ्नो साथी राम्रो स्वास्थ्य छ– मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक.
नोट: यो जानकारी व्यावसायिक आफ्नो स्वास्थ्य हेरविचार स्वास्थ्य सल्लाह लागि विकल्प इरादा छैन. आफ्नो चिकित्सक कहाँ लागू परामर्श.
3 एक अद्भुत वैवाहिक लागि सुझाव
तपाईंको सपनाहरू को नारी आकर्षित गर्न कसरी
शब्द बिना तपाईंको प्रेम व्यक्त
Visiting प्रमुख पश्चिम, आफ्नो पाल्तु जनावर संग फ्लोरिडा